Fanafihana nampivarahontsana Rangahy voatsatoka antsy, ramatoa voatifitra
150 m monja miala ny kaomisarian’ny Polisy ao Ambositra no misy ilay “shop airtel” notafihin’ny jiolahy mitam-basy ny alin’ny sabotsy hifoha omaly alahady 9 febroary.
Tafakatra hatrany amin’ny rihana faharoa misy ny tompon-trano ireo jiolahy rehefa avy nanapaka ny jiro tamin’ny kaontera amin’ilay trano, raha ny vaovao azo. Naratra voatifitra basy ilay renim-pianakaviana, ka voatery nandalo fandidiana avy hatrany tao amin’ny hopitaliben’Ambositra izy vantany vao tonga tao. Naratra mafy voavely « barre à pince » sy tsatok'antsy rangahy vadiny, ary niditra efitrano fandidiana omaly ihany koa. Tsy voakitika kosa ny efitrano fivarotana tao ambany rihana. Lasan’ireo jiolahy ny vola be sy ny fahana ary finday tao amin’ny fitoeran’entana tao ambony rihana. Farafahakeliny poa-basy in’efatra no henon’ny manodidina nanakoako tao anaty haizina. Ny havan’ny maratra no niezaka nanavotra azy mianakavy tao an-trano ka nitondra azy ireo namonjy hopitaly. Efa lasa minitra maromaro ireo jiolahy no voalaza fa tonga ny mpitandro ny filaminana, nefa tsy lavitra ny Kaomisaria ny trano voatafika. Tranga izay somary nahatezitra ny mponina.